Ihe kpatara na anyị anaghị ehi ụra na America - Ibi ndụ ahụike 2022
Ihe kpatara na anyị anaghị ehi ụra na America
Ekele dịrị Amerisleep, anyị maara ihe kpatara agwa Tom Hanks ji bụrụ "ụra ụra na Seattle" - o nwere ọrịa isi mgbawa.
Na-ekwu eh? Gụkwuo.
N'iji Google's Keyword Planner, Amerisleep, onye na-emepụta matraasi na-echekwa ụfụfụ, nyochaa afọ anọ nke ajụjụ gbasara ụra na Google iji mụta ihe na-eme ka ndị America na-atụgharị ma tụgharịa n'abalị. Dịka ọmụmaatụ, ndị California na-echegbu onwe ha maka ahụ mkpọnwụ ihi ụra, ebe ndị New York na-achọ imezi snoring. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị maka ọkụ ọgbụgba na-agbawa agbawa ma ọ bụ na-ebi n'ụlọ elu nwere mgbidi silk dị mkpa.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ndị Kansan na-atụ ụjọ maka nrọ abalị ("Aga m enweta gị ọmarịcha m, na obere nkịta gị"). Otú ahụ ka ọ dịkwa ndị nọ na Nevada; na-eche ole ndị na-anọghị n'obodo Google nwetara nrọ abalị mgbe ha na-eleta Las Vegas?
Na New England, enwere ọtụtụ mmadụ na-enwe ọsụsọ abalị - enweghị ike ịbụ menopause niile - ma ọ bụ metụtara Tom Brady - chekwaa maka ezi ndị mmadụ na Connecticut. Ha lere anya hypoxia, nke bụ ọnọdụ egwu nke anụ ahụ nke anụ ahụ anaghị enweta oxygen zuru oke.
Mana kedu ihe bụ na ndị na-achị ehi na Wyoming na-eku ume mgbe ha na-ehi ụra? N'ihe banyere ndị mmadụ na-enwe ụda isi mgbawa, mkpọtụ na-adịghị adị, ma eleghị anya, ha kwesịrị ibelata caffeine.
Na eluigwe maara ihe na-eme na Montana; Okwu kacha ele anya site na ezigbo ndị mmadụ ebe ahụ bụ halitosis, ma ọ bụ ume ụtụtụ.
Banyere steeti Lone Star, Texans chọrọ ịma ihe nrọ ha pụtara. Ọ bụghị anyị niile.
Robert Calandra bụ onye odeakụkọ nwetara ihe nrite na onye ode akwụkwọ dere ọtụtụ ihe gbasara ahụike na ọgwụ. Ọrụ ya apụtala na akwụkwọ akụkọ na obodo na mpaghara.
Ihe dị iche iche nke COVID-19 Delta na-egosi na ọ na-abawanye ihe ize ndụ nke ịmụ nwa: CDC
Ụmụ nwanyị dị ime nwere ọrịa delta variant nọ n'ihe ize ndụ dị elu nke ịmụ nwa, dịka nchọpụta ọhụrụ si kwuo
Flu vs. COVID-19: Ihe kpatara ndị ọkachamara ji na-echegbu onwe ha maka nje nje influenza
Ndị ọkachamara na-eche ugbu a na ọrịa flu nwere ike ime yana ọ nwere ike inwe mmetụta ka ukwuu karịa COVID-19
Ọgwụ antidepressants nwere ike belata ihe ize ndụ ọnwụ na ndị ọrịa COVID-19: Ọmụmụ
Ọmụmụ ihe na-amụba ìhè na ike fluoxetine ibelata ihe ize ndụ nke ọnwụ na ndị ọrịa COVID-19